Xaflad lagu daahfurayay Shirkadda Diyaaradda Safe Air oo lagu qabtay Magaalada Muqdisho – SATTA
Munaasabad lagu qabtay Hotel Afrik ayaa maanya lagu daahfuray Shirkadda Diyaarada Safe Air oo ka howlgeli doonto Soomaliya.
Wakiilka Diyaaradda ee Soomaaliya Md, Suleyman Cabdi Colad oo ugu horeyn ka warbixiyay Shirkadda Safe Air ayaa sheegay in diyaaradu safaro ku tagi doonto wadamo badan oo calamka isla markaana ay adeeg aad u sareeyo u qaban doonaan rakaabka isla markaana ay ku tartami doonaan dhanka tayada adeegga balse tartanku noqon doonin qiimaha adeegu lagu bixiy.
Sidoo kale maamulka diyaaradda ayaa sheegay Waxay iskaashi leeyihiin Shirkadda Emirates, Fly Dubai, Alexandria Airlines iyo Kenya Airways.
Safarada diyaaradda ayaa noqon doono:
Dubai to Seiyun
Airbus A21, Airbus A20.
Xafladda furitaanla diyaaradda ayaa waxaa goobjoog ahaa Gudoomiyaha Ururka SATTA Md, Cali Axmed Faarax iyo Gudoomiyaha Gudiga Adeegga diyaaradaha (IOC) Mudane Xasan Xaashi.
Gudoomiyaha Gudiga Adeegga Diyaaradaha oo xaflada ka hadlay ayaa soo dhaweeyay Shirkadda cusub isagoo sheegay in ka guddi ahaan ay si dhaw ula shaqeyn doonaan loogana baahanyahay in ay la yimaadaan adeeg aad u sareeyo.
Ugu dambeyn Gudoomiyaha Ururka SATTA ayaa sheegay in Shirkadaha diyaaradaha ay ku tartamaan tayada adeegga oo aysan ku tartamin qiimaha adeega lagu bixiyo. Gudoomiyaha ayaa soo dhaweeyay Shirkadda cusub isagoo u balan qaaday in ay la shaqeyn doonaan diyaaradda.